Ergeyga Abaaraha oo kulan la yeeshay ku-xigeenka Wasiirka arrimaha dibedda Maraykanka | dayniiile.com
Home WARKII Ergeyga Abaaraha oo kulan la yeeshay ku-xigeenka Wasiirka arrimaha dibedda Maraykanka
Ergeyga Abaaraha oo kulan la yeeshay ku-xigeenka Wasiirka arrimaha dibedda Maraykanka
Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha Mudan Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ayaa maanta kulan la yeeshay ku-xigeenka Wasiirka arrimaha dibedda Maraykanka Victoria Nuland oo booqasho ku timid Soomaaliya .
Kulanka oo looga hadlayey gurmadka Abaaraha iyo badqabka cunto ee dadka abaarta samaaysay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Safiirka dawladda Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Lary Andre , Madaxa USAID, ku-xigeenka Ergeyaga gaarka ah ee Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan gargaarka Bani’aadannimida iyo Madaxda hay’adaha WFP, UNICEF, FAO.
Kulanka ayaa ka isku waydaarsaday xog iyo tallooyin ku aaddan sidii deg-deg wax looga qaban lahaa dadka abaaruhu saameeyeen, loona heli lahaa gurmad iyo taageero caalami ah.
Ugu danbeyn, Ergeyga ayaa uga mahadceliyey Dawladda Maraykanka taageerada joogtada ah ee la garab taaganyihiin shacabka Soomaaliyeed, Waxa uu sidoo kale Ergeygu ballan qaaday in dawladda Soomaaliya ay daddaal kasta ku bixinayso sidii loo gargaari lahaa dadka abaaruhu ku dhufteen iyo in la fududeynayo hawlaha gurmadka.
Previous articleMuwaadiniinta Israa’iil ee jooga Istanbul ee dalka Turkiga oo loo sheegay in ay ka baxaan dalka Turkiga
Next articleWasiirka Caafimaadka Soomaaliya oo qaabishay Wafdi ka socda Hay’adda WHO
Guddoonka Golaha Aqalka Sare oo kulan yeeshay
Ciidmada Dowladda oo ku guuleestay in ay isku furaan Wadooyinka Waajid...
Madaxweynaha Puntland oo xilal kale Magacaabay
Ciidamo is garabsanaya oo degaano kala wareegay Al-Shabaab